स्तन क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? स्तन क्यान्सरका लक्षण र बच्ने उपयाहरु ? | Emedia Hub UK
Home Photo News स्तन क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? स्तन क्यान्सरका लक्षण र बच्ने उपयाहरु ?
स्तन क्यान्सर प्रायः दुग्ध उत्पादन गर्ने नलीबाट सुरु हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ तन्तुहरूको झुप्पाबाट पनि सुरु हुन्छ । स्तन क्यान्सर शरीरको कुनै पनि भागमा फैलिन सक्छ । स्तन क्यान्सर फैलिएमा हड्डी, कलेजो, फोक्सो तथा मस्तिष्कमा पनि ट्युमर हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । समयमै रोगको निदान र उपचार गर्ने ९६ प्रतिशत महिलाहरू पाँच वर्षपछि क्यान्सररहित हुन्छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्तनका गिर्खा क्यान्सर नहुने प्रकृतिका हुन्छन् । स्तन क्यान्सर जुनसुकै उमेरका किशोरी तथा युवतीलाई पनि हुनसक्छ ।
स्तन क्यान्सरको परीक्षण सजिलै गर्न सकिन्छ । नियमित रूपमा आफैँले आफ्नो परीक्षण गर्ने, चिकित्सकबाट परीक्षण गराउने, स्तनको गिर्खा जाँच गर्न म्यामोग्राफी गर्ने, गिर्खाभित्र ठोस वा तरल पदार्थ के छ भन्ने पत्ता लगाउन स्तनको अल्ट्रासाउन्ड गर्ने, क्यान्सर पत्ता लगाउन बायोप्सी, सिटिस्क्यान, एमआरआई, पीईटी स्क्यान, छातीको एक्सरे, लिम्फ ग्रन्थिको बायोप्सी आदि परीक्षणहरू गराउन सकिन्छ । म्यामोग्राफीबाट नै पहिलोपटक स्तन क्यान्सरको निदान गर्न सकिन्छ । २० वर्षसम्मको उमेरमा परविर्तनको लक्षण थाहा पाउन महिनाको एकपटक आफैँले आफ्नो स्तन परीक्षण गर्ने । २०–३९ वर्षको उमेरमा प्रत्येक तीन वर्षमा चिकित्सकद्वारा स्तन परीक्षण गराउने ।
यसरी गरे फेरि शासन गर्ने कुरा ज्ञानेन्द्रले